Nchịkọta nke ngwa 10 ịhọrọ site na $ 39. Mac 'Buru ngwungwu' 2017 | Esi m mac
Ọ dịwo ogologo oge kemgbe anyị wetara ngwunye nke ngwa na weebụ yana ụzọ ka mma isi mee ya karịa nke a: Mac 'Buru a Njikọ' 2017. Ọ bụ mkpọ nke ngwa anyị nwere ike ịhọrọ ka ọ masịrị anyị na nke ahụ na-adabere na foto na Mac. Ọ bụrụ na anyị chọrọ mkpokọta niile anyị nwere ike ịnweta ya maka $ 99 ma ihe ezi uche dị na ụdị ụdị a bụ na ụfọdụ ngwa ndị a adịchaghị mkpa maka onye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ chọrọ naanị mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ka ha rụọ ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla anyị nwere nhọrọ abụọ dịnụ ma ọ ga-adabere na mkpa anyị iji zụta ma ọ bụ naanị ngwa 10 ahụ.
Okwesiri ighota na ngwugwu a na aru oru rue oge ụfọdụ na obu ya kpatara ya ụfọdụ n'ime ngwa gị abụkwaghị ikikere ma gosipụta dị ka ike gwụrụ, ma anyị na-adụ gị ọdụ gaa na web ma hota ndi puru inyere gi aka. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe dị mma n'okwu ndị a na anyị nwere mmasị na naanị otu, ngwa abụọ ma ọ bụ atọ na-apụta na ngwugwu ahụ, mana ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnweta ezumike maka otu ọnụahịa ahụ, mgbe ahụ ihe niile anyị na-ewere.
Oge ụfọdụ gara aga, ngwugwu ndị a na-adịkarị na weebụ ma obere obere ka ha na-apụ n'anya, anyị chere na mmasị ndị ọrụ nwere ike ịdị obere ma ọ bụ naanị na ọ naghị akwụ ndị mmepe ụgwọ, mana n'ọnọdụ ọ bụla ọ bụrụ na anyị achọpụta ọzọ Anyị ga - eso gị niile kerịta “ngwugwu” nke ngwa dị ọnụ ala. N'okwu a Mac 'Buru ngwugwu' 2017, bụ naanị ụbọchị 1 ya mere echela ogologo oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ngwa maka ọnụahịa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » Nchịkọta nke ngwa 10 ịhọrọ site na $ 39. Mac 'Buru ngwungwu' 2017
Belata ntighari na ihuenyo iMac gị na mkpuchi a